कमव्याक गर्दै कपिल शर्मा ! - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
कमव्याक गर्दै कपिल शर्मा !
एजेन्सी । कुनै समय चर्चाको शिखरमा थिए कपिल शर्मा । तर, पछिल्लो समय उनी निकै विवादमा रहे । उनको सो पनि बन्द भयो । आजकल उनी कहिलेकाहीँ ट्वीटमा देखिन्छन् । केही उराठ लाग्दा तस्बिर शेयर गर्दछन् । तर धेरै सक्रिय भने रहँदैनन् । तर, उनका फ्यानहरु भने उनको सोको प्रतिरक्षामा रहेका छन् । उनले केही समय अगाडि एउटा सानो भिडियो पोस्ट गरेका थिए ।
उनले उक्त भिडियोमा भनेका थिए, ‘मैले सुन्तला धेरै खाने गरेको छु । त्यसैले मेरो मुख पनि सुन्तला जस्तो भएको छ ।’ धेरै दिन पछि कपिलको यस्तो रमाइलो मजाक दर्शकले देख्न पाएका हुन् । त्यसैले पनि कपिल शोमा कमब्याक गर्न लागेको अनुमान धेरैको रहेको छ ।’
जुन शोमा सुनील ग्रोवर समेत रहने छन् । ग्रोवरसँग कपिलको केही पहिले झगडा समेत थियो । तर अहिले यी दुबै एकसाथ देखिने भएका छन् । अब उनीहरुको कार्यक्रम कहिले सुरु हुन्छ यो भने सबैको चासोको विषय बनेको छ ।
कमब्याकका लागि यस्तो छ कपिलको तयारी
एजेन्सी । कमेडी बादशाहका रुपमा सबैको मनमा बस्न सफल कपिल शर्मा पुनः टिभीमा कमब्याक गर्दैछन् । यसका लागि […]
नेपाल टेलिभिजनमा बन्द भएका टेलिफिल्महरु पुनः सुचारू हुने
काठमाडौं । मिडिया हब र नेपाल टेलिभिजनसँगको तीनवर्षे सम्झौता सकिएसँगै नेपाल टेलिभिजनमा प्रशारण बन्द भएका […]
मनिषाको जन्मदिन पार्टी सुटुक्क मुम्बईमा
काठमाडाैँ । बलिउडकी नेपाली अभिनेत्री मनिषा कोइरालाले मुम्बईमा आफ्नो ४८ औं जन्मदिन मनाएकी छिन्। हालै सञ्जय […]
‘द भ्वाइस अफ नेपाल’ नेपालमा आजबाट प्रसारण हुँदै
काठमाडाैँ । ‘द भ्वाइस अफ नेपाल’ नेपालमा आजबाट प्रसारण हुँदैछ। ‘नेपाल आइडल’पछि नेपालमा अर्को […]
नयाँ चोरको साथ आउने ‘धूम ४’ बन्ने
एजेन्सी । यशराज बैनरको फिल्म ‘धूम’ को तिनैवटा सिक्वेल निकै सफल र हिट रह्यो । लामो समयपछि यसको चौथो […]